तिथि मेरो पत्रु »3परीक्षा अवधि को समयमा डेटिङ गर्न सुझाव
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 12 2021 |2मिनेट पढ्न
यो फेरि वर्ष को भनेर समय हो. परीक्षा अवधिमा तपाईं मा snuck छ र पहिले नै आफ्नो अस्तित्व को अभिशाप भएको छ. थुप्रै सबै-nighters, तनाव र cramming को घण्टा दिन आफ्नो जीवन एक विद्यार्थीको हुन्छन् रूपमा के छ. म एक zombie सर्वनाश मा थियो जस्तै म पहिले देखि नै परिसर वरिपरि हिंडे र महसुस गर्नुभएको- कि निद्रामा कमी र कफी को एक ज्यादा र चकलेट औसत छात्र के हो.
परीक्षा समय अर्को परिणाम हामी सबै केहि बिंदु मा जोड र हामीलाई मान्छे घनिष्ठ मा यो बाहिर ले भेटिन्छ. यो आफ्नो डेटिङ जीवनको लागि राम्रो खबर छैन. तपाईं कुनै सामाजिक जीवन जस्तै तपाईं शायद महसुस र आफ्नो खेल पलायन तल रहेको छ कि. तपाईं अझै यो महसुस छैन भने, तपाईं हुँदैछ.
खुसीको, तपाईं गनगन गर्नु आवश्यक छैन. यी3सुझाव आफ्नो डेटिङ जीवनमा एक उच्च चिह्न कायम गर्दा तपाईं आफ्नो परीक्षा ऐस मदत गर्न सक्छ.
विचार आफ्नो आकर्षण मा रोकिराखेको.
परीक्षा अवधिमा आफ्नो शिक्षा क्यारियर मा एक महत्त्वपूर्ण समय हो, त्यसैले यो मिति मा यसलाई शान्त एक स्मार्ट विचार हुन सक्छ. तपाईं आफ्नो परीक्षा राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भएकोले, तपाईं कारण मिति को एक जोडी बहुमूल्य अध्ययन समय गुमाइरहेका यसलाई जोखिममा गर्न चाहँदैनन्. तपाईं गहिरो सिक्ने छौं गर्दा वैज्ञानिक सूत्र र व्यापार परिदृश्य, अस्थायी रूपमा आफ्नो आकर्षण तल बारी कसरी सिक्ने तपाईं र तपाईंको साथी को लागि एक लाभ हुनेछ.
शेष जस्तै कैफीन महत्त्वपूर्ण छ.
रेडबुल, आइसक्रिम, चिप्स र कफी परीक्षा समयमा महत्त्व एक उच्च स्तर विकास गर्न लाग्न. तथापि, यो डेटिङ गर्न आउँदा तिनीहरूले उपयोगी साबित छैन, त्यसैले सन्तुलन आफ्नो नयाँ सबै भन्दा राम्रो मित्र छ. तपाईं सबै दिन अध्ययन भने यो तपाईं कुनै पनि राम्रो गर्न छैन, सबै रात, घाम देख्न कहिल्यै र कुनै पनि सलिुहोला छैन. अध्ययन र विराम बीच सन्तुलन कायम महत्त्वपूर्ण छ र आफ्नो अध्ययन क्षमता र परीक्षा प्रदर्शन वृद्धि साबित भएको छ.
समय मा फिटिंग तनाव कम गर्न, तनाव, र आनन्द उठाउँछन् केही सूर्यका महत्वपूर्ण छ मा. यी अध्ययन विश्रामहरू आफ्नो प्रियजनलाई समय खर्च गर्न आदर्श अवसरहरूमा. हरेक पटक एक चलचित्र रात भएको विचार वा सँगै एक टिभि हेर्न.
वैकल्पिक, बाहिर रही र सक्रिय हुँदा एक राम्रो सम्बन्ध गतिविधि छ, साथै आफ्नो समग्र स्वास्थ्य को लागि एक लाभ रूपमा- आफ्नो आहार देखेर चिनी र कैफीन को हुन्छन्. उच्च शिक्षा जीवनको तनाव बारे cramming सत्र र शेखी बीच छोटो पृष्ठभूमिका लागि जानुहोस्. ताजा हावा ताजा आफ्नो मस्तिष्क राखन हुनेछ.
आफ्नो छोटो जीवन Skype मा च्याट चाहे, फोन मा कुराहरु बस आफ्नो आवाज सुन्न, रात cuddle सत्र वा निद्रामा-ओभरमा लेट, निश्चित तपाईं काम र खेल बीच सन्तुलन कायम गर्न.
यो कसैको राम्रो आत्म-व्याख्यात्मक. आफ्नो परीक्षा जितेको एक पल्ट मनाउन भुल्ने छैन! तपाईं दुवै आफ्नो सबै परीक्षा घोडा को विजय उत्सव मनाउन गर्न सक्छन् कि मजा केहि योजना र आफ्नो जडान पुनः जगाउन. तपाईं एक उत्सुक बीवर छौं र अग्रिम मा केहि योजना त यो तपाईं को लागि तत्पर केही दिन हुनेछ.
यी3सुझाव व्यस्त परीक्षा अवधिमा आफ्नो प्रेम जीवन मा आगो माथि रहन मदत गर्नेछ. आफ्नो असंख्य पाठ्यक्रम संग ज्ञान यी TidBits अध्ययन गरेर, तपाईं आफ्नो डेटिङ जीवन साथै आफ्नो परीक्षा विजयी गर्न सक्षम हुनेछु.